Khilaaf Ka Dhex Qaraxay Madaxtooyada Somaliland Iyo Baanka Dhexe + Xukuumada Oo Lacag Cusub Soo Daabaceysa | Saxil News Network
Khilaaf Ka Dhex Qaraxay Madaxtooyada Somaliland Iyo Baanka Dhexe + Xukuumada Oo Lacag Cusub Soo Daabaceysa
Hargeysa (SaxilNews):- Warar isa soo taraya oo ka dhashay Sicir bararka waxba laga qaban karila’yahay ee cirka isku sii shareeraya ayaa u dhaxeeya Xukuumadda Dhexe iyo masuuliyiinta Baanka Dhexe, kuwaas oo isku af-garan la’ kulamo ay doonayeen inay ay kaga wadahadlaan sidii loo fulin lahaa go’aamaddii ay hore u soo saareen.
Ma cada mawqifyada kala duwan ee ay isku hayaan Baanka iyo Xukuumaddu, hase yeeshee ilo wareedka ayaa sheegaya inay xukuumaddu ka war wareegayso kulan oo dalbaday Guddoomiyaha Baanka Dhexe.
Warar aan la hubin oo shalay Suuqa soo galay ayaa sheegay in Guddoomiyaha Baanku qarka u saaran yahay in uu iscasilo, balse illaa hada si rasmi ah ugumuu dhawaaqin, inkasta oo khilaafka u dhaxeeya labada dhinac uu isa soo tarayo.
Dhinaca kale, warar laga helay xukuumadda ayaa sheegaya inay dhawaan dalka soo gaadhi doonto lacag cusub oo ay xukuumaddu soo daabacday, taasoo la filayo inay u badnaan doonto Noodhka shanta boqol ah oo suuqyadda Somaliland gaabaabsi ku ah.
Sicir bararka iyo sarrifka qiimaha lacagaha qalaad ayaa maalin ba maalinta ka danbaysa sii kacaya waxaana hoos u dhac ku imanayaa shilling-ka Somaliland.
Go’aamadii xukuumadda Somaliland wax kaga qabanaysay cabashada Sicir bararka ayaan waxba laga fulin, waxaanay dadweynuhu isweydiinayaan waxa ka qaldan Xukuumadda iyo Guddidii ay u saartay Sicir bararka.